Ranked Gaming Client လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Online မှာ တက်ပြီး Dota Skill စမ်းချင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံး နေရာလေးတစ်ခုပါပဲ။ အင်တာနက်ဂိမ်းဆိုင်များအတွက် မရှိမဖြစ် Client လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စတင်ကစားလိုသူများအတွက် Register လုပ်ပြီး ကစားနိုင်ပါတယ်။
RGC နဲ့ တွဲဖက်ပြီးကစားနိုင်ဖို့ Warkey လေးပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေဗျား။
Posted by kmo at 4:54 PM No comments:
Advanced JPEG Compressors ဖြင့် အရွယ်အစားကြီးမားသော ဓာတ်ပုံများအား e-mail ပို့ရာတွင် ပုံအရည်အသွေးများစွာ ကျဆင်းမှုမရှိစေပဲ ဖိုင်များအား ချုံ့ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Posted by kmo at 1:21 PM No comments:
ဆရာ ဇော်လင်း (Youth) ရေးသားထားတဲ့ A+ Certification Exam (Basic, Intermediate) Level များ အတွက် Computer in Details စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကွန်ပျူတာနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ကွန်ပျူတာအခြေခံရှိပြီးသူတိုင်း လေ့လာဖတ်ရှုသင့် ပါသည်။ ဤစာအုပ်တွင် သင်သိပြီးသားလိုလိုနှင့် သင်မသိသေးသော အကြောင်းအရာများ ပါဝင်သည်။
အကြောင်းအရာတစ်ခုကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုကြည့်ပါ။ ယောင်အမ်းအမ်းဖြစ်နေလျှင် သင်ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ဖို့ လိုနေပြီ။
သင်သည် ကွန်ပျူတာပြင်သမားတစ်ဦးဖြစ်နေခဲ့သည်တိုင် ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ဖို့လိုကောင်းလိုနေလိမ့်ဦးမည်။
ဒီစာအုပ်ကို ကောင်းစွာဖတ်ပြီးချိန်တွင် သင်သည် ကွန်ပျူတာစက်ပိုင်းအကြောင်းကို အတော်ကြီး စုံစေ့စွာ သိသွားလိမ့်မည်။
(Computer Hardware Maintenance & System Administration)
Author: Zaw Lin (Youth)
Posted by kmo at 8:23 PM No comments:
ဆရာ ဦးအောင်မြင့် (M.E.,AUSTRALIA) ရဲ့ C++ Complete (Vol-1) စာအုပ်ပါ။
Vakok Online Game ရဲ့ WOW ကို VPN ခံပြီး ကစားရသောသူများအတွက်သာ လိုအပ်ပါတယ်။ Windows7သုံးသော OS များတွင် Run as administrator ဖြင့်ဝင်ရောက်ရပါမည်။
Posted by kmo at 12:09 PM3comments:
Posted by kmo at 9:48 AM No comments:
Windows7အသုံးပြုသူများအတွက် Activation ဖြစ်စေမည့် ပရိုဂရမ်ငယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Windows732-bit, 64-bit နှစ်ခုစလုံးအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။
အမှတ်တရ ရိုက်ကူးထားသည့် ဓာတ်ပုံများပျောက်ဆုံးပျက်စီးသွားပါက ပြန်လည်ပြီးရှာဖွေပေးနိုင်သည့် ပရိုဂရမ်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်အရ ပျောက်ဆုံးသွားသော ပုံများအားလုံး ပြန်လည်ပြီး ရရှိစေခဲ့ပါသည်။
Posted by kmo at 10:15 AM No comments:
Posted by kmo at 6:40 PM5comments:
Posted by kmo at 11:55 AM 1 comment:
အချိန်ကာလတစ်လျှောက်လုံး စာစီစာရိုက်လုပ်ငန်းသမား အားလုံးလိုလိုက အသုံးပြုနေကြတဲ့ စာစီ (work processing software) ဟာ PageMaker ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စ...
Photoshop Tutorials: How To Convert Pictures To Vectors PDF + PSD | 5.23 MB | 30 Pages
System Requirements Pentium 166. Pentium III recommended. 32 MB of system RAM. 128 MB recommended.2GB available hard disk space. CD-RO...
Mozilla Firefox isafast, full-featured web browser that makes browsing more efficient than ever before. Firefox includes pop-up blockin...
ကွန်ပျူတာဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော ကွန်ပျူတာအမေးအဖြေကဏ္ဍပါ အမေးအဖြေများကို ပြန်လည် တည်းဖြတ်ထုတ်ဝေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကွန်ပျူတာကို နေ့စဉ်အသုံးပြုနေ...
Adobe Photoshop CS3 ကို အသုံးပြုပြီး ပန်းကနုတ်ဘောင်ပြုလုပ်ခြင်း (၁) မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ၊ thesis များစတဲ့ သက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းတွေရဲ့ မျက...